Tuesday, 19 February 2019 10:57
ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် Master Plan အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို Master Planအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း(SEA)ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံချက်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်တို့နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
Saturday, 16 February 2019 14:54
မြေယာလျော်ကြေး နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ရှင်ကို ပေးပြီးပါက မြို့သစ်အိမ်ရာစီမံကိန်းကို စတင်မည်ဟုဆို
တိုင်းအစိုးရမှ အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ရန်ကုန်မြို့သစ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် မြေယာတွေကို သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို မြေရှင်ထံ မြို့မြေအဖြစ် ပြန်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ ပေးပြီးပါက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင် အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားထားပါသည်။
Saturday, 16 February 2019 11:14
ရန်ကုန်မြို့သစ် မြေပြင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစိုးရ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကုမ္ပဏီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ညှိနှိုင်းထားဟုဆို
ရန်ကုန်မြို့သစ်တည် ဆောက်ရန် မြေသိမ်းဆည်းမှု ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီး မြေပြင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ မကြာမီ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားထားပါသည်။
Friday, 15 February 2019 13:39
သဘာဝဘေးဖြစ်ရင် ပိုင်ဆိုင်မှုမခိုင်မာနိုင်သော ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းတွေ
အထပ်မြင့်လူနေတိုက်ခန်းတွေအနေနဲ့ သဘာဝဘေးကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာဆုံးရှံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် အဲဒီအခန်းတွေမှာ ဝယ်ယူနေထိုင်နေသူတွေဟာ မူလနေရာကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ မသေချာပါဘူး။ လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံသတ်မှတ်ချက်မှာတော့ သဘာဝဘေးတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါက မူလနေထိုင်သူကို မူလနေရာမှာ ပြန်လည်ချထားပေးရမယ်ဆိုတော့ သတ်မှတ်ချက်ပါရှိပါတယ်။
Thursday, 14 February 2019 11:26
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်က မြို့ပြနဲ့ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းကြီးလေးခုအနက်မှာ Eco Green City စီမံကိန်းကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက် အကောင်အထည်ဖော်မယ့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Wednesday, 13 February 2019 16:05
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် စီမံကိန်း ၇၉ ခုကို ယုခနှစ်အတွင်းဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရန်ကုန်မြို့ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေသလဲ???
ရန်ကုန်မြို့အား စက်မှုဇုန်များဝိုင်းရံထားသည့် မြို့တစ်မြို့တည်ဆောက်သွားရန် စီစဉ်နေပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် မြို့ကြီးအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း (မှော်ဘီ-တိုက်ကြီးလမ်းပိုင်း) ၄၈ ပေ လေးလမ်းသွား ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Wednesday, 13 February 2019 13:35
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း စတင်ရန် အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုမှု အဆိုပြုလွှာ (Expression of Interest – EOI) ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့သစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ (NYDC) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Monday, 11 February 2019 09:35
ရန်ကင်းအိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်နေသလဲ???
ရန်ကင်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ကပြော ကြား ထားပါသည်။
( Bath & Toilet )